Tenga Drospirenone powder (67392-87-4) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Madzimai eHormoni / Drospirenone upfu (67392-87-4)
Rating: SKU: 67392-87-4. Category: Madzimai eHormoni
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukuraira kweDosspirenone powder (67392-87-4), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Drospirenone powder inogadzira progestin inova analogu kune spironolactone. Inowanikwa mune dzinoverengeka nzira dzekudzivirira kuberekwa. Drospirenone inosiyana nemamwe eprogestin ekugadzira mukuti chimiro chezvemishonga muzvidzidzo zvepamberi zvinoratidza kuti iri padyo neprogesterone yepanyama….
Drospirenone powder video
Drospirenone powder Basic Characters
Name: Drospirenone powder
Molecular Kurema: 366.49
Drospirenone powde mutambo
Kemikari zita: Drospirenone powde,
Zita rebazi: Yasmin, Yaz
Drospirenone powde Usage
Kutora mushonga uyu kunogona kuwedzera mukana wako wekuvhara ropa, kurohwa, kana kuora mwoyo. Iwe unotonyanya kukanganisa kana iwe uine huwandu hwehutano hwehuga, chirwere cheshuga, high cholesterol, kana iwe uri kunyanyisa. Ngozi yako yekurova chirwere kana ropa rinopisa mukati mako mugore rokutanga rokutora mapiritsi ekuberekwa. Ngozi yako yakanyanyawo apo iwe unotangazve mapiritsi ekudzivirira kuberekwa mushure mokunge usina kutora mavhiki e4 kana kupfuura.
Kusvuta kunogona kuwedzera zvikuru njodzi yako yeropa, chirwere, kana kuora mwoyo. Ngozi yako inowedzera mukuru iwe uye iwe unowedzera utsi. Iwe haufaniri kutora mushonga uyu kana ukasvuta uye wapfuura makore 35.
Usashandise kana iwe uri nepamuviri. Rega kushandisa mushonga uyu uye taurira chiremba wako pakarepo kana iwe ukava nepamuviri, kana kana ukashaya 2 panguva yekuenda kumushure. Kana iwe uchangobva kuva nemwana, kumirira kwemavhiki masere 4 usati watora mushonga uyu.
Iwe haufaniri kutora mushonga uyu kana uine:
-an adrenal gland disorder;
-kudzidziswa kana kusadzivirirwa kwehuwandu hwemhepo;
-rwere chirwere (coronary artery disease, nhoroondo yekurwadziwa kwepfungwa, kurohwa, kana ropa);
-kuwedzera kungozi yekuva nemagazi eropa nekuda kwedambudziko remwoyo kana chirwere cheropa;
-kudzivirira zvinetso (zvikurukuru kana zvichikonzerwa nechirwere cheshuga);
-nhoroondo yekenza yakabatana nehommone, kana kenza yezamu, chiberekero / chibereki, kana mukadzi;
-kusasuka kweropa kunenge kusina kuongororwa nachiremba;
-iver disease kana kenza yeropa;
-severe migraine misoro (neara, kushaya simba, kushaya simba, kana kuona kuchinja), kunyanya kana iwe mukuru kudarika 35;
-nhoroondo ye jaundice inokonzerwa nekuzvitakura kana mapiritsi ekuberekwa kwekuberekwa;
-kunge iwe utsi uye wava kupfuura makore 35; kana
-kutora chero chirwere che hepatitis C chine ombitasvir / paritaprevir / ritonavir (Technivie).
Kuti uone kuti mushonga uyu wakachengeteka kwauri, taura chiremba wako kana iwe wakambove nawo:
-kutambura kwepfungwa, kukwiridzwa kweropa, kana iwe unowanzova neropa;
-high mazinga e potassium muropa rako;
- cholesterol yegorosi kana triglycerides, kana iwe uri kunyanyisa;
-mhepo kana chirwere chetsvo;
-kushandura utachiona, chirwere cheshuga, gallbladder chirwere; kana
-a migraine musoro.
Mahomoni mune mishonga iyi anogona kudarika mukaka wemvere uye anogona kukuvadza mwana anoyamwa. Mushonga uyu unogonawo kuderedza mukaka wekugadzirwa kwekaka. Usashandise kana iwe uri kuyamwa.
Chii chinonzi Dhaspirenone powde
ICHI CHINONYANWA CHINOKWANZIRWA NEZVANHU ZVINOGONA KUZIVA KUZIVA KUNYANYA KUNYANYA KUSVISISWA SEZVAKASIKWA SOMUNYANYA WOKUTANGA KUDZIDZA KUNYANYA KUNYANYA ZVINHU ZVINOKUDZIDZWA.
Tora mishonga iyi nemuromo sekurayirirwa nachiremba wako, kana kana usina kudya, kazhinji kamwe kamwe nezuva. Sarudza nguva yezuva iro iri nyore kuti iwe uyeuke, uye tora mapiritsi ako panguva imwechete zuva rimwe nerimwe, maawa 24 ari oga. Kutora mishonga iyi mushure mekudya kwemanheru kana kuti panguva yekurara kunogona kubatsira kuderedza dumbu nekugumbura nekunyunyuta.
Tevera mirayiridzo yepackage kuti uwane tablet yekutanga, tanga nehwendefa rekutanga mubhokisi, uye uende navo muhutano hwakarurama. Usatora chero doses chero ripi zvaro. Kuberekwa kunowanzoita kana ukasapotsa mapiritsi, tanga mapepa matsva, kana kutora mapiritsi ako panguva yakasiyana yezuva kupfuura nguva dzose.
Mapiritsi ako ane mapiritsi ane 21 ane mushonga unoshanda (ane hormone). Inogonawo kuva ne 7 yekuyeuchidza mapiritsi (pasina hormones) pakuguma kwepakiti. Tora mapiritsi anoshanda (nemahomoni) kamwe chete zuva rimwe nerimwe kwemazuva 21 mumutsara. Kana uri kushandisa chigadzirwa nemapiritsi e28, tora piritsi yeuchiyeuchidzo kamwe chete kwemazuva e7 mushure mushure mekunge watora piritsi yekupedzisira kushanda kunze kwekunge zvakataurwa nachiremba wako. Kana uri kushandisa chigadzirwa nemapiritsi e21, usatora mahwendefa emazuva e7 kunze kwokunge uchitungamirirwa nachiremba wako. Iwe unofanirwa kuva nenguva yako kazhinji mukati mezuva re3 mushure mokunge iwe watora purogiramu yekupedzisira yakashanda mukufamba. Mushure mokunge makatora mapiritsi ekupedzisira muchikwata kana mazuva 7 musina kutora piritsi yakashanda, tanga peji itsva zuva rakatevera kana iwe usina nguva yako. Kana iwe usingawani nguva yako, taura nechiremba wako.
Kana iyi ndiyo nguva yokutanga iwe uri kushandisa mishonga iyi uye hausi kutendeuka kubva kune imwe maitiro ehomoni yekuberekwa kwekuberekwa (zvakadai sechikwata, mamwe mapiritsi ekuzvidzivirira kuberekwa), tora tablet yekutanga mumutambo musi weSvondo wekutanga shure kwekutanga kwe nguva yako yokuenda kumwedzi kana pazuva rekutanga rako. Kana nguva yako inotanga paSvondo, tanga kutora iyi mishonga pazuva iroro. Nekutanga kwekushandiswa kwekushandisa chete, shandisa imwe yehutachiona husingaiti mahomoni (semakondomu, spermicide) kwemazuva ekutanga e7 kudzivirira kubata pamuviri kusvikira mishonga ine nguva yakakwana yekushanda. Kana iwe uchitanga pazuva rekutanga remakore ako, haufaniri kushandiswa kubatsiririra kuberekwa kwekuberekwa vhiki yekutanga.
Bvunza chiremba wako kana wemhizha kuti uwane ruzivo pamusoro pekushandura kubva kune mamwe maitiro ekudzivirira kuberekwa kwehomoni (zvakadai sechikwata, mamwe mapiritsi ekuberekwa nekuberekwa) kune chigadzirwa ichi
Sei Drospirenone powde mabasa
Drospirenone powde ndeimwe yemapurogiramu akasiyana-siyana akasiyana-siyana anoshandiswa mukuzvarwa kwepiritsi mapiritsi. Kuwanda kwemapiritsi ekuberekwa kwepabonde (kusanganisa muromo wekudzivirira pamuviri) kunobatanidza shanduro yemhando yehomoni yevakadzi inonzi progesterone (inozivikanwa seprogesin) ine yakagadzirwa shanduko yehomoni yekadzi isrogen. Kuwedzera pakudzivirirwa kwepamuviri, mamwe mapiritsi ekuberekwa ane Dropirenone powde anobvumirwa kuti apore zviratidzo zvepenstrial dysphoric disorder (PMDD), kubata mushonga unoenzanirana, uye kuwedzera huwandu hwemaitiro, kune vakadzi vanosarudza kushandisa chirongwa chekudzivirira pamuviri kuberekwa control ..
Progestin dzakadai seD Drospirenone powde dzinoparadzanisa zvakasununguka mumakamuri masvikiro mumharaunda yekuberekwa kwevakadzi, mammary gland, hypothalamus, uye pituitary uye kusunga kumushandi weprogesterone. Imwe yakasungirirwa kumusana, progestin inononoka kutama kwekubudiswa kwegonadotropin kubudisa hormone (GnRH) kubva ku hypothalamus uye kusina kufambiswa kwep-pre-ovulatory LH.
Usasvuta paunenge uchitora mapiritsi ekuberekwa, kunyanya kana iwe mukuru kune makore gumi nemana.
Mapiritsi ekudzivirira kubata pamuviri haakuchengetedze kubva kuzvirwere zvepabonde - kusanganisira HIV neAIDS. Kushandisa kondomu ndiyo nzira chete yekuzvidzivirira kubva kuzvirwere izvi.
Mishonga yakawanda inogona kuwirirana nemishonga yekuzvidzivirira nekuberekwa uye inoita kuti isanyanya kushanda, izvo zvingaguma pakuita pamuviri. Ethinyl estradiol inogonawo kukanganisa ropa remamwe mimwe mishonga, ichiita kuti isanyanya kushanda kana kuwedzera migumisiro yechirwere. Izvi zvinosanganisira mishonga yemishonga uye inopfuura-the-counter mishonga, mavitamini, nemishonga yemishonga ..
Drospirenone powde Ane Mikana Dzose
Drospirenone powde inopesana nedzimwewo maitiro ekugadzirwa kweprogestin mukuti maitiro ezvokurapa mune zvemaprojekiti mune zvidzidzo zveplineclinical inoratidza kuti iri pedo neprogesterone chaiyo. Sezvo zvakadaro ine anti anti mineralocorticoid, inopesana neestrogen-yakasimbiswa basa re renin-angiotensin-aldosterone system, uye haisi uyerogenic.
Yakanyatsoshandiswa pakugadzirisa zvinotevera kutaurirana mumuromo kana kuti kutengesa. Iyo miviri mikuru yemetabolite haishandisi uye inoumbwa yakasununguka neYYP450 enzyme system. Zvinonzi metabolites ndiyo asidi yeD Drospirenone pfumbu yakaumbwa nekuzarura rhete ye lactone uye 4,5-dihydro-Drospirenone powde-3-sulfate.
misoro, manzwiro anochinja, kunzwa akaneta kana kutsamwa;
kurema kuwanda; kana
kuchinja mumwedzi wako, kuderedza zvepabonde motokari.
Iri haisi rondedzero yakazara yemigumisiro uye vamwe vanogona kuitika. Dana chiremba wako kune mazano ekurapa nezvemigumisiro.
How to buy Drospirenone powder from AASraw